Umatshini ovelisa umoya-QIANGSHENG MAGNETS CO., LTD
I-AFPMG yeeTurbines zomoya ezincinci kunye naMandla eHydro
Senza uthotho lwamandla amatsha aphezulu asebenza kakuhle, amile okwe-disc, ngaphakathi (ngaphandle), kwisigaba esithathu, iAxial Flux Permanent Magnet Generator (AFPMG) ene-stator engena-ironless (i-ironless). Ngokuqhutywa ngokuthe ngqo kukuqhutywa kweinjini yomoya encinci (i-SWT) kunye nabavelisi bamandla e-Hydro Power.AFPMG zibonelela ngezibonelelo ngokobungakanani nokubonakala kwazo. Ubume be-nical ye-AFPMG ilula, kwaye umxholo ojikelezayo ngesakhiwo se-stator unika umvelisi ukusebenza kakuhle kunye nokusebenza ngokukuko.
Ukusebenza okuphezulu ngesantya esisezantsi
Akukho ilahleko ngomatshini wokuqhuba, akukho lahleko yobhedu lweRotor ngenxa yemagneti esisigxina kwaye akukho stator ilahleko yangoku kwi-stator engenasiphelo
Ukusebenza kwe-AFPMG, kuxhomekeke kwimodeli, ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-90.
Ubukhulu obuncinci kunye nobunzima
I-AFPMG ngokukhethekileyo ilula kwaye ihambelana, ulwakhiwo lulula. Iijenreyitha zisebenzisa isinyithi esincinci kakhulu kulwakhiwo lwazo, ngelixa zihlala zomelele kakhulu kwaye zinobomi obude.
Ubunzima obuncinci bomvelisi kunye nobukhulu benza ukuba kuncitshiswe ubungakanani kunye nexabiso lazo zonke iiturbines zomoya.
Umthamo othile ophakamileyo (umthamo wokukhutshwa ngokobunzima beyunithi) ungaphezulu kakhulu kwabo bavelisi bakhuphisanayo. Oku kuthetha ukuba ngobukhulu obufanayo kunye nobunzima.
Iindleko zokugcina ezincinci kakhulu
I-AFPMG iqhuba ngokuthe ngqo, akukho giya yebhokisi, inkqubo engenaoyile, ukunyuka kobushushu obuphantsi
Ukusebenza kwamandla okuphezulu kwizantya eziphantsi kolu shishino kuthetha ukuba abavelisi banokuxhasa naluphi na uhlobo lweinjini yomoya ngolona hlobo lubanzi lwesantya somoya.
Ukusetyenziswa kokupholisa umoya kunciphisa iindleko zolondolozo kwaye kukomeleza kakhulu ukuzimela kweeyunithi zamandla.
I-torque yokuqala ephantsi kakhulu
I-AFPMG ayinaso isikhonkwane sokukhaba kunye ne-torque ripple, ke itorque yokuqala iphantsi kakhulu, ukuqhuba ngokuthe ngqo i-injini yomoya encinci (i-SWT), isantya somoya sokuqala singaphantsi kwe-1m / s.
Ingxolo ephantsi kakhulu, ukungcangcazela okuncinci, akukho bhanti loomatshini, iiyunithi okanye iyunithi yokuthambisa, ubomi obude
Itekhnoloji ye-100% ecocekileyo kokusingqongileyo kunye nezinto ezisetyenzisiweyo kwimveliso ngexesha lokuphila kwayo ixesha elide kunye nokurisayiklilisiswa kwexesha elizayo akunabungozi kwindalo esingqongileyo.
Iijenereyitha zomoya ezincinci (SWT)
Izixhobo zombane eziqhutywa ziipetroli okanye ii-diesel,
· Oomatshini abaqhuba imoto yombane, njengemoto kunye nejeneretha.
Ukusetyenziswa kwe-AFPMG kunika esinye isisombululo kumanqanaba ombane okanye oomatshini bombane ngokubanzi. Ulwakhiwo lwediski kunye neempawu eziluncedo zombane zibonisa ezona mpawu ziphambili kwimveliso yamandla ombane kunye nakwiinkqubo zokuqhuba zombane ezifanelekileyo.
Uluhlu olusebenzayo loMvelisi waMagnet osisigxina (PMG)
Ulwakhiwo kunye nokusebenza kobuchwephesha kwenza iiJenereyitha eziSisigxina zeMagnethi (PMG) lukhetho olufanelekileyo kwizicelo zomoya omncinci (SWT).
Uluhlu olusebenzayo lwe-PMG lugubungela iimfuno zomoya omncinci (SWT). Kwii-injini zomoya ezi-1-5KW, zinokusebenzisa istator esinye se-AFPMG, kwiiturbines ezi-5KW-50KW, ezinokusebenzisa i-AFPMG ngokwakha iirotors eziphindwe kabini.
Ukulinganiswa kwamandla ngaphezulu kwe-50KW kugutyungelwe yiRadial Flux Permanent magnet Generator (RFPMG).
I-QM-AFPMG Ngaphakathi Ukujikeleza I-QM-AFPMG engaphandle Ukujikeleza
imodeli ikaliwe Mveliso amandla (Township) ikaliwe isantya (RPM) ikaliwe Mveliso I-Voltage ubunzima (Ikg) imodeli ikaliwe Mveliso amandla (Township) ikaliwe isantya (RPM) ikaliwe Mveliso I-Voltage ubunzima (Ikg)
I-AFPMG710 10 250 380VAC 145 I-AFPMG770 15 260 380VAC 165
3 100 220VAC / 380VAC I-AFPMG700 10 250 380VAC 135
I-AFPMG560 15 400 300VAC 135 7.5 200 380VAC
4 200 220VAC / 380VAC 90 I-AFPMG550 4 200 220VAC / 380VAC 80
2 130 I-112VDC / 220VAC / 380VAC 2 130 I-112VDC / 220VAC / 380VAC
1.5 100 I-112VDC / 220VAC / 380VAC 1.5 100 I-112VDC / 220VAC / 380VAC
1 100 I-56VDC / 112VDC / 220VAC / 380VAC 1 100 I-56VDC / 112VDC / 220VAC / 380VAC
I-AFPMG520 3 200 I-112VDC / 220VAC / 380VAC 70 I-AFPMG510 3 200 I-112VDC / 220VAC / 380VAC 65
2 150 I-112VDC / 220VAC / 380VAC 2 150 I-112VDC / 220VAC / 380VAC
1 90 I-56VDC / 112VDC / 220VAC 1 90 I-56VDC / 112VDC / 220VAC
I-AFPMG460 2 180 I-112VDC / 220VAC / 380VAC 52 I-AFPMG450 2 180 I-112VDC / 220VAC / 380VAC 48
1 130 I-56VDC / 112VDC / 220VAC 1 130 I-56VDC / 112VDC / 220VAC
I-AFPMG380 2 350 I-112VDC / 220VAC / 380VAC 34 I-AFPMG380 2 350 I-112VDC / 220VAC / 380VAC 32
1 180 I-56VDC / 112VDC / 220VAC 1 180 I-56VDC / 112VDC / 220VAC
0.5 130 I-56VDC / 112VDC 0.5 130 I-56VDC / 112VDC
I-AFPMG330 1 350 I-56VDC / 112VDC / 220VAC 22 I-AFPMG320 1 350 I-56VDC / 112VDC / 220VAC 20
0.5 200 I-56VDC / 112VDC 0.5 200 I-56VDC / 112VDC
0.3 150 I-28VDC / 56VDC 0.3 150 I-28VDC / 56VDC
0.2 100 I-28VDC / 56VDC 0.2 100 I-28VDC / 56VDC
I-AFPMG270 0.5 350 I-28VDC / 56VDC 11 I-AFPMG260 0.5 350 I-28VDC / 56VDC 11
0.2 200 I-28VDC / 56VDC 0.2 200 I-28VDC / 56VDC
0.1 130 I-14VDC / 28VDC 0.1 130 I-14VDC / 28VDC
I-AFPMG230 0.2 350 I-14VDC / 28VDC 8.5 I-AFPMG220 0.2 350 I-14VDC / 28VDC 8.5
0.1 200 I-14VDC / 28VDC 0.1 200 I-14VDC / 28VDC
I-AFPMG210 0.1 350 I-14VDC / 28VDC 6 I-AFPMG200 0.1 350 I-14VDC / 28VDC 6
I-AFPMG165 0.3 850 I-14VDC / 28VDC 4 I-AFPMG150 0.3 850 I-14VDC / 28VDC 4
0.15 500 I-14VDC / 28VDC 0.15 500 I-14VDC / 28VDC
1. Ubukhulu kunye nokunyamezelana
2. Amandla emveliso, ombane kunye ne-RPM
3. Uvavanyo lokumelana nokugquma
4. Ukuqala kwetorque
5.Imveliso yocingo (Olubomvu, mhlophe, mnyama, luhlaza / mhlaba)
1.Ukusebenza: phantsi kobude beemitha ezingama-2,500 30, -XNUMX ° C ukuya +50 ° C
Phambi kofakelo, ujike ngobunono ishafti okanye indlu ukuqinisekisa ukujikeleza kokuguquguquka, akukho sandi singaqhelekanga.
3. Iziphumo ze-AFPMG zizigaba ezithathu, imveliso yocingo emithathu, ngaphambi kokufakwa, sebenzisa i-500MΩ Megger ukuya
khangela ukumelana nobushushu phakathi kocingo lwemveliso kunye necala, akufuneki libe ngaphantsi kwe-5 MΩ
4. Ukuba i-AFPMG ngumvelisi wangaphakathi we-rotor, kwinkqubo yofakelo, kufuneka iqinisekise ukuba isikisi sokutshixa sikhona, kubaluleke kakhulu
Iwaranti: iminyaka emi-2-5